काठमाडौँमा जग्गाको मूल्य प्रतिआना ४ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म, कुन क्षेत्रको कति ? (हेर्नुहोस्) – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाडौँमा जग्गाको मूल्य प्रतिआना ४ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म, कुन क्षेत्रको कति ? (हेर्नुहोस्)
काठमाडौँमा जग्गाको मूल्य प्रतिआना ४ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म, कुन क्षेत्रको कति ? (हेर्नुहोस्)
असार ११, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोनाभाइरसको संक्रमणका कारण काठमाडौंको जग्गाको मूल्याङ्कन स्थिर राखेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सातौँ नगरसभाको दोस्रो अधिवेशनमा पेश गरिएको महानगरको आर्थिक ऐनमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि महानगर क्षेत्रभित्रको जग्गाको मूल्याङ्कन स्थिर राखिएको हो ।
महानगरको प्रस्तावित आर्थिक ऐनमा काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र जग्गाको प्रतिआना न्यूनतम ४ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । यस्तो मूल्य जग्गा रहेको ठाउँ र जग्गाले छोएको बाटोको चौडाईका आधारमा तय गरिएको हो ।
महानगरपालिकाले महानगपालिका क्षेत्रभित्रका जग्गाहरूको सम्पत्ति कर मूल्यांकन प्रयोजनका लागि मूल्य कायम गरेको हो । केशरमहल प्रवेशद्वारदेखि पश्चिम ठमेल मूलचोक हुँदै क्षेत्रपार्टी चोकसम्मको मूलबाटोमा जोडिएका जग्गाहरू, हनुमानढोका, जिल्ला प्रहरी कार्यालयपूर्व सूरज आर्केड, इन्द्रचोक, असन हुँदै भोटाहिटी चोकसम्म, असन चोकदेखि जमल राष्ट्रिय नाचघरसम्म र सोदेखि पुर्व विश्वज्योति हल हुँदै तीनधारा पाठशालासम्म मूलबाटोसँग जोडिएका, महेन्द्रसालिकदेखि काठमाडौं प्लाजासम्म मूलसडकसंग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाको मूल्य प्रतिआना ५० लाख छ।
काठमामाडौंमा जग्गाको मूल्य हेर्नुहोस्